IiTipis zokuvunwa kwasendle kunye neMisebenzi yaseYork (Hawthorne) - I-Airbnb
IiTipis zokuvunwa kwasendle kunye neMisebenzi yaseYork (Hawthorne)
Ukuqesha indawo yeTipi-Ukusetyenziswa kweQela okuKhethekileyo. Iitipi ezintathu zeseyile yomqhaphu, ezihonjisiweyo zesimbo seBoho, zijikeleze isangqa sakho somlilo esigqunyiweyo. I-Tipis nganye ilala ezine yenza indawo yokuhlala ye-12
Umthetho weNxolo: Nceda uqaphele ukuba asiyiyo iklabhu yasebusuku, kwimithetho yethu inqaku lokuba unokuzisa isithethi sohlobo lwe-blu tooth esiphathwa ngesandla esiqhutywa kwifowuni ephathwayo. Uxolo kodwa sibeneengxaki ezimbalwa kulo nyaka ukuze sibeke oku ngaphambili. Siyi-eco glamping ebamba amaqela, oku akufani nendawo yepati yasendle.
Ukongeza kwii-tipis ezintathu kunye nesangqa somlilo kukho i-Timba Cabin eyahlukileyo ye-loo / ishawa kunye nekhitshi kunye netafile yokutya. Kukho iibhentshi zepiknikhi ezichokoziweyo ukuze kutyelwe ngaphandle kwaye indawo ineoveni yepizza yanamhlanje.
Bhukisha indawo kwaye wongeze kulonwabo lwethu, imisebenzi ephefumlelwe yindalo edumileyo njengokutya ukutya kwasendle, ukutolika okunethuku, kunye neeseshini zobuchule bendalo. ngokuhlala impelaveki; Yinxalenye ebalulekileyo yomnikelo wethu ukuba uthathe imiSebenzi emibini yokuVuna eNdle, enexabiso ukusuka kwi-£14 ukuya kwi-£23 inye.
Indawo ye-tipi ihlala kwindawo evulekileyo yasemaphandleni ebonisa i-York yasezilalini. Iidolophu zakho ezikufutshane yiYork (imizuzu eli-15) kunye nedolophu entle yentengiso yasePocklington, enezitolo ezinkulu, iibhari, iindawo zokutyela kunye neeresityu-kwiikhilomitha nje ezi-3 kude. Ecaleni kwesiza se-tipi kukho i-Allerthorpe Lake lusuku losapho lokuhamba, ulwandle, ikhefi kunye nemidlalo yasemanzini.
Indawo ye-tipi ihlala kwindawo evulekileyo yasemaphandleni ebonisa i-York yasezilalini. Iidolophu zakho ezikufutshane yiYork (imizuzu eli-15) kunye nedolophu entle yentengiso yasePocklington, enezitolo ezinkulu, iibhari, iindawo zokutyela kunye neeresityu-kwiikhilomitha nje ezi-3 kude. Ecaleni kwesiza se-tipi kukho i-Allerthorpe Lake lusuku losapho lokuhamba, ulwandle, ikhefi kunye nemidlalo yasemanzini. Kukho imijelo emihle yokuhamba yonke indawo kwaye siyimizuzu nje eli-15 ukusuka eYork.
Hello im Di and I run wild harvest tipis and activities /school of self-reliance teaching foraging, archery and natural crafts , sometimes we like a road trip or have to travel with work so also use it as customers x
Andihlali kule ndawo ke zinzeni ngaphakathi kwaye ndiza kufowunela emva kokungena ukuze ndiqinisekise ukuba unayo yonke into oyifunayo kwaye ndithi Molo. Kukho umlimi ohlala kwisiza oluncedo kakhulu ukuba ufuna into ebalulekileyo ngokukhawuleza.
Andihlali kule ndawo ke zinzeni ngaphakathi kwaye ndiza kufowunela emva kokungena ukuze ndiqinisekise ukuba unayo yonke into oyifunayo kwaye ndithi Molo. Kukho umlimi ohlala kwisiz…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pocklington